ကြှနျတျောတို့ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ နိုငျငံတကာ ရုပျရှငျကားတှမှော Sound Effect တှကေို ဘယျလိုဖနျတီးကွလဲ? - Lifestyle Myanmar
ရုပျရှငျခဈြပရိတျသတျတှအေနနေဲ့ နိုငျငံတကာ ရုပျရှငျကားတှမှော အသုံးပွုတဲ့ Sound Effect တှကေို ဘယျလိုဖနျတီးကွသလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားမယျထငျပါတယျ။ ကငျးကောငျတို့ ဂျေါဆီလာတို့လို ဧရာမသတ်တဝါကွီးတှေ အျောသံဖွဈအောငျ ပူပေါငျးတှကေို အသုံးပွုကွတာ၊ မိုးရှာတဲ့အသံဖွဈအောငျ ဘကှေနျကွျောတဲ့ အသံနဲ့ ဖနျတီးယူကွတယျဆိုတာ သငျသိရငျ အံသွသှားပါလိမျ့မယျ။ ဟုတျပါတယျ ။ Foley အနုပညာရှငျမြားက ကြှနျတျောတို့ အကွိုကျဆုံး ရုပျရှငျတှမှော အသုံးပွုတဲ့ အထူးအသံမြားကို ပွနျလညျဖနျတီးဖို့ နစေ့ဉျသုံးပစ်စညျးမြားကို အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ကွံဆတီထှငျမှုနှငျ့ အဆုံးမဲ့ စိတျကူးမြားက ရုပျရှငျကားတဈကားကွညျ့တဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့အတှကျ တကယျ့ဖွဈပကျြနသေလား ထငျရလောကျအောငျ မယုံနိုငျစရာ အတှအေ့ကွုံကို ပေးစှမျးပါတယျ။ သူတို့ဟာ တကယျ့မှျောဆရာတှပေါပဲ။
၁။ ဧရာမသတ်တဝါကွီးတှရေဲ့ ဟိနျးသံတှေ၊ ညညျးညူသံတှေ
ဧရာမသတ်တဝါကွီးတှရေဲ့ ကယျြလောငျတဲ့အျောသံ၊ ညညျးညူသံတှေ ဖနျတီးဖို့အတှကျ အရမျးအန်တရာယျကငျးတဲ့ အရာကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ အဲ့ဒါက ပူပေါငျးတဈလုံးပါပဲ။ ဥပမာ- ၂၀၁၄ခုနှဈက ဂျေါဇီလာကားမှာ Foley ပညာရှငျမြားက သူတို့ရဲ့ အသံကယျြကယျြလောငျလောငျကို ရရှိစဖေို့ လမှေုတျထားတဲ့ ပူဖောငျးကို အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ပူဖောငျး ပှတျတဲ့အသံကို ရယူခဲ့ကွပါတယျ။
တခါတရံမှာ Foley အနုပညာရှငျတှကေ မိုးရှာတဲ့အသံကို မှတျတမျးတငျဖို့ ရာသီဥတုဆိုးရှားတဲ့အခွအေနကေို စောငျ့စရာမလိုပါဘူး။ တကယျတော့ တခါတရံမှာ တကယျ့မိုးရှာတဲ့အသံက သူတို့လိုခငျြသလောကျ အသံမကယျြပါဘူး။ ဒယျအိုးပျေါမှာ ဘကှေနျတှကေို ကွျောလိုကျရငျ မိုးရှာနတေဲ့ အသံရပါပွီ။
အရိုးတှေ ကြိုးပဲ့သှားတာ၊ ဧရာမသတ်တဝါကွီးရဲ့ ခွထေောကျအောကျက အရာတှကေို ကွိတျခှဲလိုကျတဲ့အသံတှကေ အမှနျတကယျတော့ ဘယျသူ့ကိုမှ ထိခိုကျဖို့ မလိုပါဘူး။ တကယျတော့ ဒါက ဆလရီတဈမြိုးတညျးကိုသာ သုံးတာပါ။ ဆလရီရိုးတှကေို အစညျးလိုကျ လိမျလို့ ထှကျလာတဲ့ ဒီအသံဟာ ကွိတျခှဲတဲ့ ဘယျအသံမဆို တုပလို့ရပါတယျ။
၄။ မွငျးခှာ သံ
မာကြောတဲ့ မကျြနှာပွငျပျေါမှာ အုနျးမှုတျခှကျကို ခေါကျတဲ့အခါ မွငျးခှာသံထှကျပျေါပါတယျ။ ဒီ ကွံဆတီထှငျမှုက ဘယျစိတျခံစားမှုကို မဆို အရှိနျအဟုနျမွှငျ့အောငျ ကူညီနိုငျပါတယျ။ အသံပညာရှငျတှအေတှကျ လှယျကူပွီး စြေးပေါတဲ့ ရှေးခယျြစရာတဈခုပါပဲ။
ရိုကျကူးနစေဉျမှာ ပြံနတေဲ့ မွှားရဲ့ အသံကို ဖမျးဖို့ဆိုတာ ခဲယဉျးလှပါတယျ၊ ပိုပွီး ခကျတာက မွှားတှပေျေါမှာ အနိမျ့အမွငျ့ ပွေးနတေဲ့ အသံကို ဖမျးနိုငျခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီအခွအေနမြေိုးမှာ ဝါးခြောငျးသေးသေးလေးဖွငျ့ ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။ Foley ပညာရှငျမြားဟာ ဝါးခြောငျးကို မိုကျကရိုဖုနျးရှမှေ့ာ မွနျမွနျ ဝှယေ့မျးခွငျးဖွငျ့ လိုအပျတဲ့ အသံသကျရောကျမှုကို ဖမျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ၊
လေးလံတဲ့ staple gun က သနေတျပဈသံဖနျတီးဖို့ အကောငျးဆုံးအရာဝတ်တုတဈခုဖွဈပါတယျ။
၇။ နှငျးထဲမှာ လမျးလြှောကျခွငျး
လတျလတျဆတျဆတျ ဆီးနှငျးထဲမှာ ကြှတျကြှတျနဲ့ လမျးလြှောကျသံဟာ တကယျ့ကို အံ့သွဖှယျကောငျးပါတယျ။ ပွောငျးမှုနျ့က စတူဒီယိုတဈခုအတှငျးမှာ ပွနျလညျဖနျတီးဖို့ အစားထိုးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ပညာရှငျမြားက သတ်ေတာအကွီးကွီးထဲကို ပွောငျးမှုနျ့ မြားစှာ လောငျးထညျ့ပွီး အထူးဖိနပျတှကေို ဝတျဆငျကာ ခွလှေမျးလှမျးကွပါတယျ။
မတူညီတဲ့အရာဝတ်တုမြားကို လကျတှကေ့တြဲ့ အသံဖနျတီးဖို့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ထဲမှ တဈခုကတော့ အလူမီနီယမျ သတ်တုပွားကွီးတှေ ဖွဈပါတယျ။ မိုကျကရိုဖုနျးရှမှေ့ာ ၎င်းငျးကို လှုပျရမျး လှဲခွငျးဖွငျ့ မိုးကွိုးသံထှကျစပေါတယျ။ နောကျထပျ side effects တခြို့ကို ထညျ့သှငျးပွီး ရာသီဥတုဆိုးရှားတဲ့ ရုပျရှငျကားတှမှော အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
၉။ လကျသီးနဲ့ ထိုးတဲ့အသံ
ရိုကျနှကျတဲ့အသံ၊ လကျသီးနဲ့ ထိုးတဲ့အသံတှကေို ဖနျတီးဖို့ မာကြောတဲ့ မကျြနှာပွငျပျေါကို အသားစိမျး ပွုတျကတြဲ့ အသံကို အသံကို အသုံးပွုကွပါတယျ။ တခါတရံမှာ အသားကို လကျသီးနဲ့ ထိုးကွပါတယျ။ မာကြောတဲ့အရာပျေါကို ခန်ဓာကိုယျပွုတျကတြဲ့ အသံကို လိုခငျြတဲ့အခါ စာအုပျကွီးတဈခုကိုသုံးပွီး ဖနျတီးနိုငျပါတယျ။
တံခါးဖှငျ့တဲ့အခနျး၊ ဒါနျးလှဲတဲ့အခနျးမှာ ကြီကြီလို့မွညျအောငျ သံခြေးတတျနတေဲ့ တခါးပတ်တာမြားကို အသုံးပွုကွပါတယျ။ သူတို့က ဒီဟာတှကေိုသုံးပွီး ဟောငျးနှမျးနတေဲ့ တံခါးသံတှကေို ဖနျတီးကွပါတယျ။ ဒီအသံတှကေ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျကားတှမှော သုံးပါတယျ။
ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အခြိနျတှမှော စိတျလှုပျရှားမှု ပိုခံစားရစဖေို့ နှလုံးခုနျသံ လိုအပျပါတယျ။ ပလတျစတဈအမှိုကျပုံးမြားက ရိုမနျ့တဈမဆနျပမေယျ့ လိုအပျတဲ့ နှလုံးခုနျသံကို ဖနျတီးဖို့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အနုပညာရှငျမြားက ပလတျစတဈပုံးကို လှနျပဈလိုကျပွီး လိုခငျြတဲ့ ရလဒျရအောငျ စညျးခကျြမှနျမှနျနဲ့ ခေါကျပါတယျ။
၁၂။ အနမျးရဲ့ အသံ
ဒီ Foley နညျးစနဈက ပြျောစရာကောငျးပွီး မွနျဆနျပါတယျ။ ကောငျးမှနျတဲ့ အနမျးသံတဈခုကို ဖနျတီးဖို့ အနုပညာရှငျးမြားက သူတို့လကျတှကေို မကွာခဏ နမျးလရှေိ့ပါတယျ။ သူတို့က ခဈြခွငျးပွညျ့နှကျနတေဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈခုကို ဖနျတီးဖို့ နှုတျခမျးနဲ့ လကျတှကေို နမျးတဲ့အသံကို သုံးပါတယျ။ ရလဒျပိုကောငျးအောငျ လကျတှကေို မနမျးခငျ သူတို့နှုတျခမျးမှာ ရအေနညျးငယျစှကျထားပါတယျ။
တကယျ့မီးက တဖဈြဖဈြမွညျတဲ့အသံ အမွဲတမျး မဖွဈစနေိုငျပါဘူး။ ဒီအသံက တကယျ့ကို နှေးထှေးစပွေီး တခါတရံမှာ စိတျကနြေပျဖို့ကောငျးတဲ့ အသံဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျတှထေဲမှာ တဖဈြဖဈြမွညျနတေဲ့ မီးအသံကို ဖနျတီးဖို့ ပစ်စညျးထညျ့တဲ့ bubble wrap တှဖေဈြညှဈပွီး အသံဖနျတီးကွပါတယျ။
ကွကျဥ အခှံအကျနတေဲ့ အသံကို ဖနျတီးဖို့ ရခေဲမှုနျ့ဖော့ကွှပျကို အသုံးပွုပါတယျ။ အခြို့သော ရုပျရှငျမြားမှာ သတ်တဝါတှဟော ဥတှကေနေ ပေါကျဖှားပါတယျ။ စိုစှတျတဲ့ အသံရဖို့ ဆပျပွာရညျတှနေဲ့ ဖုံးအုပျနတေဲ့ ရာဘာလကျအိတျမြားကို ဝတျဆငျရငျး ဖရဲသီးတှကေို ဖဈြညှဈပွီး အသံဖနျတီးကွပါတယျ။
ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ Sound Effect တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးကြလဲ?
ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ Sound Effect တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးကြသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်။ ကင်းကောင်တို့ ဂေါ်ဆီလာတို့လို ဧရာမသတ္တဝါကြီးတွေ အော်သံဖြစ်အောင် ပူပေါင်းတွေကို အသုံးပြုကြတာ၊ မိုးရွာတဲ့အသံဖြစ်အောင် ဘေကွန်ကြော်တဲ့ အသံနဲ့ ဖန်တီးယူကြတယ်ဆိုတာ သင်သိရင် အံသြသွားပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ။ Foley အနုပညာရှင်များက ကျွန်တော်တို့ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ အထူးအသံများကို ပြန်လည်ဖန်တီးဖို့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကြံဆတီထွင်မှုနှင့် အဆုံးမဲ့ စိတ်ကူးများက ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့အတွက် တကယ့်ဖြစ်ပျက်နေသလား ထင်ရလောက်အောင် မယုံနိုင်စရာ အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ တကယ့်မှော်ဆရာတွေပါပဲ။
၁။ ဧရာမသတ္တဝါကြီးတွေရဲ့ ဟိန်းသံတွေ၊ ညည်းညူသံတွေ
ဧရာမသတ္တဝါကြီးတွေရဲ့ ကျယ်လောင်တဲ့အော်သံ၊ ညည်းညူသံတွေ ဖန်တီးဖို့အတွက် အရမ်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲ့ဒါက ပူပေါင်းတစ်လုံးပါပဲ။ ဥပမာ- ၂၀၁၄ခုနှစ်က ဂေါ်ဇီလာကားမှာ Foley ပညာရှင်များက သူတို့ရဲ့ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကို ရရှိစေဖို့ လေမှုတ်ထားတဲ့ ပူဖောင်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပူဖောင်း ပွတ်တဲ့အသံကို ရယူခဲ့ကြပါတယ်။
တခါတရံမှာ Foley အနုပညာရှင်တွေက မိုးရွာတဲ့အသံကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကို စောင့်စရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ တခါတရံမှာ တကယ့်မိုးရွာတဲ့အသံက သူတို့လိုချင်သလောက် အသံမကျယ်ပါဘူး။ ဒယ်အိုးပေါ်မှာ ဘေကွန်တွေကို ကြော်လိုက်ရင် မိုးရွာနေတဲ့ အသံရပါပြီ။
အရိုးတွေ ကျိုးပဲ့သွားတာ၊ ဧရာမသတ္တဝါကြီးရဲ့ ခြေထောက်အောက်က အရာတွေကို ကြိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အသံတွေက အမှန်တကယ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါက ဆလရီတစ်မျိုးတည်းကိုသာ သုံးတာပါ။ ဆလရီရိုးတွေကို အစည်းလိုက် လိမ်လို့ ထွက်လာတဲ့ ဒီအသံဟာ ကြိတ်ခွဲတဲ့ ဘယ်အသံမဆို တုပလို့ရပါတယ်။
၄။ မြင်းခွာ သံ
မာကျောတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အုန်းမှုတ်ခွက်ကို ခေါက်တဲ့အခါ မြင်းခွာသံထွက်ပေါ်ပါတယ်။ ဒီ ကြံဆတီထွင်မှုက ဘယ်စိတ်ခံစားမှုကို မဆို အရှိန်အဟုန်မြှင့်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အသံပညာရှင်တွေအတွက် လွယ်ကူပြီး ဈေးပေါတဲ့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါပဲ။
ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာ ပျံနေတဲ့ မြှားရဲ့ အသံကို ဖမ်းဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းလှပါတယ်၊ ပိုပြီး ခက်တာက မြှားတွေပေါ်မှာ အနိမ့်အမြင့် ပြေးနေတဲ့ အသံကို ဖမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ဝါးချောင်းသေးသေးလေးဖြင့် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Foley ပညာရှင်များဟာ ဝါးချောင်းကို မိုက်ကရိုဖုန်းရှေ့မှာ မြန်မြန် ဝှေ့ယမ်းခြင်းဖြင့် လိုအပ်တဲ့ အသံသက်ရောက်မှုကို ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊
လေးလံတဲ့ staple gun က သေနတ်ပစ်သံဖန်တီးဖို့ အကောင်းဆုံးအရာဝတ္တုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၇။ နှင်းထဲမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်း
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဆီးနှင်းထဲမှာ ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်သံဟာ တကယ့်ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ပြောင်းမှုန့်က စတူဒီယိုတစ်ခုအတွင်းမှာ ပြန်လည်ဖန်တီးဖို့ အစားထိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်များက သေတ္တာအကြီးကြီးထဲကို ပြောင်းမှုန့် များစွာ လောင်းထည့်ပြီး အထူးဖိနပ်တွေကို ဝတ်ဆင်ကာ ခြေလှမ်းလှမ်းကြပါတယ်။
မတူညီတဲ့အရာဝတ္တုများကို လက်တွေ့ကျတဲ့ အသံဖန်တီးဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကတော့ အလူမီနီယမ် သတ္တုပြားကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကရိုဖုန်းရှေ့မှာ ၎င်းကို လှုပ်ရမ်း လွှဲခြင်းဖြင့် မိုးကြိုးသံထွက်စေပါတယ်။ နောက်ထပ် side effects တချို့ကို ထည့်သွင်းပြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၉။ လက်သီးနဲ့ ထိုးတဲ့အသံ
ရိုက်နှက်တဲ့အသံ၊ လက်သီးနဲ့ ထိုးတဲ့အသံတွေကို ဖန်တီးဖို့ မာကျောတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို အသားစိမ်း ပြုတ်ကျတဲ့ အသံကို အသံကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ အသားကို လက်သီးနဲ့ ထိုးကြပါတယ်။ မာကျောတဲ့အရာပေါ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ပြုတ်ကျတဲ့ အသံကို လိုချင်တဲ့အခါ စာအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုသုံးပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
တံခါးဖွင့်တဲ့အခန်း၊ ဒါန်းလွှဲတဲ့အခန်းမှာ ကျီကျီလို့မြည်အောင် သံချေးတတ်နေတဲ့ တခါးပတ္တာများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူတို့က ဒီဟာတွေကိုသုံးပြီး ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ တံခါးသံတွေကို ဖန်တီးကြပါတယ်။ ဒီအသံတွေက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ သုံးပါတယ်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပိုခံစားရစေဖို့ နှလုံးခုန်သံ လိုအပ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပုံးများက ရိုမန့်တစ်မဆန်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ နှလုံးခုန်သံကို ဖန်တီးဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အနုပညာရှင်များက ပလတ်စတစ်ပုံးကို လှန်ပစ်လိုက်ပြီး လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ရအောင် စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ ခေါက်ပါတယ်။
၁၂။ အနမ်းရဲ့ အသံ
ဒီ Foley နည်းစနစ်က ပျော်စရာကောင်းပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အနမ်းသံတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ အနုပညာရှင်းများက သူတို့လက်တွေကို မကြာခဏ နမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့က ချစ်ခြင်းပြည့်နှက်နေတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လက်တွေကို နမ်းတဲ့အသံကို သုံးပါတယ်။ ရလဒ်ပိုကောင်းအောင် လက်တွေကို မနမ်းခင် သူတို့နှုတ်ခမ်းမှာ ရေအနည်းငယ်စွက်ထားပါတယ်။
တကယ့်မီးက တဖျစ်ဖျစ်မြည်တဲ့အသံ အမြဲတမ်း မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒီအသံက တကယ့်ကို နွေးထွေးစေပြီး တခါတရံမှာ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တဖျစ်ဖျစ်မြည်နေတဲ့ မီးအသံကို ဖန်တီးဖို့ ပစ္စည်းထည့်တဲ့ bubble wrap တွေဖျစ်ညှစ်ပြီး အသံဖန်တီးကြပါတယ်။
ကြက်ဥ အခွံအက်နေတဲ့ အသံကို ဖန်တီးဖို့ ရေခဲမှုန့်ဖော့ကြွပ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အချို့သော ရုပ်ရှင်များမှာ သတ္တဝါတွေဟာ ဥတွေကနေ ပေါက်ဖွားပါတယ်။ စိုစွတ်တဲ့ အသံရဖို့ ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ ရာဘာလက်အိတ်များကို ဝတ်ဆင်ရင်း ဖရဲသီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး အသံဖန်တီးကြပါတယ်။